Golaha Wasiirada oo goor dhaw lagu dhaawaqayo – Radio Muqdisho
Golaha Wasiirada oo goor dhaw lagu dhaawaqayo
Golaha Wasiirada ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda si rasmi ah loogu dhawaaqo, iyadoo ay iminka xafiiska Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ay ka socoto xaflad ku aadan ku dhawaaqista golaha Wasiirada cusub.
Munaasabadda ayaa waxaa ku sugan mas’uuliyiin dhowr ah oo ay ku jiraan xubno ka tirsan Wasiirada Xukuumaddii hore ee Ra’iisul wasaare Cabdiweli, diblomaasiyiin iyo marti sharaf kale, waxaana la filayaa in Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke uu ku dhawaaqo golahiisa Wasiirada cusub.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka ee Xafiiska Ra’iisul wasaaraha Feysal Muuse Maxamed ayaa soo sheegay in hoolka xafladda ay kusuganyihiin mas’uuliyiin dhowr ah, isla markaana ay meel gabo gabo ah marayso ku dhawaaqista golaha Wasiirada cusub ee Soomaaliya.
Wixii ku soo kordha waan idin soo gudbin doonaa.
Juventus oo Ka Adkaatay Kooxda Napoli